US ichasimbisa COVID-19 vaccine mvumo kumabhizinesi akazvimirira mushure meGore Nyowani
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » US ichasimbisa COVID-19 vaccine mvumo kumabhizinesi akazvimirira mushure meGore Nyowani
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
US ichasimbisa COVID-19 vaccine mvumo kumabhizinesi akazvimirira mushure meGore Nyowani.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti kuchine vashandi vazhinji vasina kuchengetedzwa uye vanoramba vari panjodzi yekurwara zvakanyanya kana kufa kubva kuCOVID-19.
IUS ichatanga kumanikidza vaccination yeconavirus yevashandi vakazvimiririra kutanga Ndira 4.
Kutadza kutevedzera zvakatemerwa vaccine kuchaunza zvirango zvinorema kumabhizinesi, ayo achasangana nefaindi yemadhora zviuru gumi nezvina pakutyora.
Mafaindi acho achawedzera nekutyorwa kwakawanda, vakuru vakuru vakadaro.
The White House yakazivisa nhasi kuti US ichatanga kumanikidza Mutungamiriri Biden's COVID-19 vaccine yevashandi vakazvimirira kubva muna Ndira 4, 2022.
Inosungirwa yekudzivirira coronavirus yemabhizinesi ichasimbiswa mushure meGore Nyowani, sekureva kweWhite House press service. Avo vasina kubaiwa vanozoongororwa svondo rega rega.
"Zvakakosha kunzwisisa kuti kuchine vashandi vazhinji vasina kuchengetedzwa uye vanoramba vari panjodzi yekurwara zvakanyanya kana kufa neCCIDID-19," White House media service statement yakadaro.
Kutadza kutevedzera zvakatemerwa neCCIDID-19 vaccine kuchaunza zvirango zvinorema kumabhizinesi, izvo zvichatarisana nefaindi inosvika zviuru gumi nezvina zvemadhora pakutyora.
Mafaindi acho achakwira nekutyorwa kwakawanda, vakuru White House vakuru vakati. Hazvina kujeka kuti vashandi vangangodzingwa basa here kana vakaramba kubaiwa kana kuongororwa.
Izvo zvinodiwa kuti vemubatanidzwa makondirakiti vabaye nhomba zvakadzoserwa kumashure mwedzi uye zvinozoitwa kubva pazuva rimwe chetero.
"Panosvika Ndira 4, 2022, [zvehutano] zvivakwa zvinofanirwa kuona kuti vashandi vese vawana mapfuti anodiwa kuti vabatwe zvizere - angave madosi maviri ePfizer, madosi maviri eModerna, kana dosi rimwe chete raJohnson & Johnson," the White House Mukuru mukuru akadaro.